पाँच माध्यम इन्टरनेटको गति जान्ने
१६ बैशाख २०७०, सोमबार १७:००	0 476
इन्टरनेट, आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको यो। कम्प्युटरको जालोका रुपमा एउटा प्राविधिक तन्त्रविज्ञान मात्र रहेन यो अब। आम मानिसको दैनिकीको आवश्यकता बनिसकेको छ। त्यसैले त विश्वका विकसित मुलुकले यसलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत नै गरिसकेका छन्। विकसित देशका नागरिकका लागि मौलिक हक बनेको इन्टरनेट नेपालमा भने निक्कै महँगो छ। त्यसमा पनि डाउनलोड अनि अपलोड हुने गति निक्कै सुस्तो। द्रूत गतिको इन्टरनेट चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायक महँगो शुल्कमा मात्र बेच्छन्। भोल्यूम बेस भनिने चलाएको आधारमा पैसा लाग्ने सेवाको इन्टरनेट भने निक्कै द्रूत रहेको भन्ने दाबी विज्ञापनहरुमा पाइन्छ। यथार्थमा चाहिँ उपभोक्ताले विज्ञापनमा उल्लेख गरे जत्तिको डाउनलोड तथा अपलोडको गति भने पाएका हुँदैनन्। विभिन्न एमबीपीएसको अर्न्तराष्टि्रय स्तरको सेवा भनिएका थ्रीजी डाटासेवाले पनि पैसाको तुलनामा गति चाहिँ गतिलो दिएका छैनन। महँगो इन्टरनेट चलाइ रहेका हामीलाई सेवा प्रदायकले दिएको इन्टरनेट कनेक्सनमा ब्याण्डवीथको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ। एउटै आइपी र ब्याण्डवीथ विभिन्न ग्राहकलाई बाँढ्ने भएकाले सबैले इन्टरनेट चलाएको अवस्थामा वेबसाइटहरु निक्कै सुस्तो खुल्ने समस्या आम भइसकेको छ। तपाइँ इन्टरनेट सुस्तो चलेर हैरान हुनुभएको छ भने तपाइँलाई कुन स्तरको गतिमा इन्टरनेट चल्ने भनेर सेवा प्रदायकले भनेको छ त्यसअनुसारको गति तपाइँको इन्टरनेट कनेक्सनमा
वेबसाइटलाई बनाउनुहोस् पीडीएफ
१२ बैशाख २०७०, बिहीबार १६:०७	0 319
हामीले दैनिक रुपमा अनेकन वेबसाइटहरु हेरिरहेका हुन्छौं। तीनमा रहेका सामग्री महत्वपूर्ण र कामलाग्ने ठानेर त्यसलाई सुरक्षित पनि राखिरहेका हुन्छौं। अधिकांशले बुकमार्क वा वेबसाइटलाई नै सेभएज गरेर राखेका हुन्छन्। त्यो भन्दा पनि उत्तम विकल्प चाहिँ वेबसाइटका उपयुक्त लागेका पोस्ट वा सामग्रीलाई पीडीएफमा उतार्नु हो। जसका लागि विभिन्न सफ्टवेयरहरु उपलब्ध छन्। त्यसो त केही अनलाइन टूल पनि छन् जसले वेबसाइट वा तीनमा रहेका सामग्रीलाई पीडीएफ फाइलका रुपमा उतार्छन्। त्यस्तै निशुल्क रुपमा वेबसाइटलाई पीडीएफमा उतार्ने सेवा प्रदायक हो पीडीएफक्राउड।
कुकुर मन पराउनुहुन्छ यो हेर्नुस्
१२ बैशाख २०७०, बिहीबार १२:३६	0 316
कुकुर, घरपालुवा मात्र होइन इमान्दार र मालिकको सोझो गर्ने जनावरको रुपमा लिइन्छ। धेरैका घरमा यो जनावर शौख अनि घरको शोभा बनेर रहेको हुन्छ। तपाइँहामी मध्ये धेरै वर्षमा कम्तिमा एक दिन भएपनि यसको पुरा गर्दछौं। यमराजको दूतको रुपमा। त्यसो भैरवको वाहनको रुपमा पनि कुकुरको पुजा गरिन्छ।
कुन वेबसाइटका यूनिक भिजिटर कति
९ बैशाख २०७०, सोमबार ०८:०५	0 343
वेबसाइट तथा ब्लग चलाउनेका लागि महत्वको विषय हो यसका भिजिटर अर्थात् पाठक, दर्शक एवं स्रोता। किनभने वेबसाइटका भिजिटरको आधारमा नै त्यसको लोकप्रियता र बजार क्षमताको आँकलन हुन्छ। त्यसो त कुनै वेबसाइटमा विज्ञापन गर्ने वा नगर्ने अनि कति समय र स्थानमा कत्रो विज्ञापनका लागि कति पैसा लाग्ने भन्ने कुरा पनि त्यो वेबसाइटको दैनिक भिजिटरको संख्याको आधारमा नै निर्धारित हुन्छ। त्यसो त वेबसाइटमा देखिने विज्ञापनले इन्टरनेटको ब्याण्डवीथ खाने र गति नै सुस्तो बनाइदिने भएकाले वेबसाइटका विज्ञापन रोक्ने खालका सफ्टवेयर पनि उपलब्ध हुन थालिसकेका छन्।
के तपाइँको पासवर्ड सुरक्षित छ?
६ बैशाख २०७०, शुक्रबार ०८:४८	0 308
पार्सवर्ड, नेपालीमा भन्नुपर्दा कूटशब्द। यो यस्तो शब्द हो जो गोप्य राख्नुपर्छ, राखिन्छ। जसले डिजिटल अनि भर्चुअल विश्वमा गोपनियता र विषयलाई व्यक्तिगत राख्छ। यो वास्तवमा डिजिटल साँचो हो। जसले कम्प्युटका कागजात देखी इमेल अनि सामाजिक सञ्जालका खाता (एकाउन्ट)लाई गोप्य र सुरक्षित राख्न सकिन्छ। विभिन्न इमेल तथा सामाजिक सञ्जालका खाता सञ्चालनका लागि तपाइँहामी सबैले पासवर्डको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। पछिल्लो समयमा इन्टरनेट, मोबाइल र कम्प्युटरको डिजिटल दुनियाँमा हृयाकिङ समस्या बनेर देखिएको छ। फेसबुक तथा ट्वीटर जस्ता अर्न्तराष्टि्रय सामाजिक सञ्जालका सर्भरमा साइबर हमला गरेर प्रयोगकर्ताको पासवर्ड चोरी गर्ने क्रम बढिरहेको छ। तपाइँ आफैले पनि कार्यालय तथा घरका कम्प्युटर एवं इमेलको पासवर्ड हृयाक भएको अनुभव गर्नुभएको होला।
जान्नुहोस् औषधीको दूष्प्रभाव
५ बैशाख २०७०, बिहीबार ०७:२३	0 253
औषधी, जिवन दिने शक्ति हुन्छ यसमा। त्यसैले त औषधी लेख्ने डाक्टरलाई भगवानको रुप मान्छौं हामी। बिरामी परेको समयमा डाक्टरको भनाइ र लेखाइ नै हाम्रो लागि निक्कै आड भरोसाको कुरा हुन्छ। त्यसैको आधारमा त जिवनको गाडीलाई लिक र ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ। डाक्टरको सिफारिसमा हामीले दैनिक वा समय समयमा अनेकन औषधीहरु खाइरहेका हुन्छौं। डाक्टर मात्र कहाँ हो र औधषी पसले, केमिष्ट अनि औषधी मुलो र बिरामीलाई स्याहारेरै जान्ने भएका टोल छिमेकका दाजु, काकाका सिफारिसमा पनि औधषी खाइरहिएको हुन्छ। त्यसो त भन्दा औषधी दिने र उपचार गर्ने सबैलाई सम्मान गरेर डाक्टर भनिएपनि धेरै कमले डाक्टर वा विशेषज्ञको सेवा लिएका हुन्छन्। त्यसो त सामान्य टाउको दुखाइका लागि विशेषज्ञकोमा जाने कुरा पनि हुँदैन। डाक्टरलाई कुर्ने समय अनि तीन देखी पाँचसय शुल्क लिने डाक्टरले तीन मिनेट पनि समय दिँदैनन्। जसले गर्दा बिरामीले औषधी पूर्ण रुपमा डाक्टरको भरमा खाइरहेका हुन्छन्। जसले पार्न सक्ने दूष्प्रभाव (साइड इफेक्ट)का बारेमा बिरामी बनेर जाने हामीलाई निक्कै कम हुन्छ। वास्तवमा औषधी दिने डाक्टररले त्यसको काम साथै त्यसले पार्न सक्ने दूष्प्रभावका बारेमा पनि बिरामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हो। तर, डाक्टरहरु टाउको दुख्यो, रिंगटा लाग्यो वा यस्तै केही भयो भने औषधी खान बन्द गरेर आफूलाई भेट्न आउनु मात्र भनिरहेका हुन्छन्।
पासवर्डको झमेलाबाट मुक्ति
२२ चैत्र २०६९, बिहीबार १७:१२	0 320
अनलाइनमा सुरक्षाका लागि तपाइँका सबै इमेल, सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न वेसबाइटमा खोलिएका खाताका लागि फरक फरक पासवर्डप्रयोग गर्नुपर्छ। अनलाइन सुरक्षाका बारेमा सचेत पार्नेहरु यही भन्छन्। तर तपाइँले बनाउनु भएका फरक फरक सेवा प्रदायकका इमेल, फेसबुक, ट्वीटर अनि अरु पनि धेरै वेबसाइटमा राखेका पासवर्डहरु सम्झन निक्कै गाह्रो कुरा हो। वास्तवमा डिजिटल जमानामा पार्सवर्डहरु नै गायत्री मन्त्र बनेका छन्। बिर्सनै नहुने। यस्ता धेरै पासवर्डप्रयोग गर्नु पर्नेहरुका लागि अनलाइनमा पासवर्ड व्यवस्थापन गर्ने टुलहरु पनि निशुल्क नै उपलब्ध छन्।
वेबसाइटका विज्ञापनलाई गर्नुस बिदाइ
१९ चैत्र २०६९, सोमबार १३:०२	0 247
इन्टरनेट चलाउनेहरुका लागि वेबसाइट र तीनमा देखिने विज्ञापन सामान्य कुरा हुन्। सामान्य यो अर्थमा कि सँधै देख्दा र वेबसाइटका सूचना र फोटोसँगै कम्प्युटरमा डाउनलोड भइरहेकाले यो अनौठो अनि नयाँ लाग्दैन। तपाइँलाई याद नहुन सक्छ गुगलका विज्ञापन साथै फ्ल्यास र जीआइएफ जस्ता वेबसाइटमा देखिने विभिन्न विज्ञापनले धेरै ब्याण्डवीथ खाइरहेका हुन्छन्। जसले गर्दा चलाएको आधारमा पैसा काटिने (भोलुमबेस) इन्टरनेट सेवा लिएकाको धेरै पैसा अनुत्पादक रुपमा विज्ञापन हेर्नमा खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यसो त इन्टरनेटको गति समेत सुस्त भइरहेको हुन्छ। पप अपका रुपमा विभिन्न वेबसाइटमा खुल्नासाथ विज्ञपनको अर्को विण्डो खुलेर पनि तपाइँलाई हैरान पारिरहेको हुनसक्छ। यसखालका विज्ञापन तथा पप अप र पप डाउनले हैरान हुनु भएको छ। तपाइँको एनसेल डाटाकार्ड वा वाइम्याक्सबाट इन्टरनेट चलाउँदा धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ। भने तपाइँको खर्च हुने डाटाको भोलुम घटाउने भरपर्दो उपाय पनि छ। जसले तपाइँले वेबसाइटहरु हेर्दा कम्प्युटरमा डाउनलोड हुने डाटाहरु मध्ये वेबसाइटका विज्ञापन जति हटाइदिन्छ। जसले ती विज्ञापन डाउनलोड हुँदा तीनले खपत गर्ने डाटाको भोलुम खर्च हुनबाट जोगिन्छ। साथै यसले वेबसाइटले डाउनलोड गर्ने विभिन्न खालका कुकीज तथा सफ्टवेयर, स्पाइवेयरबाट समेत जोगाउँछ। यसको प्रयोगबाट तपाइँलाई अनलाइन गोपनियता राख्न पनि सजिलो हुन्छ। यसबाट तपाइँ आफूले चाहेको वा हेर्न खोजेको बाहेक अन्य डाटा डाउनलोडमा हुने ब्याण्डवीथ र पैसाको खर्च जोगिन्छ।
कतै वेबसाइट डाउन त छैन
१८ चैत्र २०६९, आईतवार २०:४८	0 281
इन्टरनेट दैनिकीको अहम हिस्सा बनिसकेको छ। यतिखेर कम्प्युटर भनेको नै इन्टरनेट हो। अनि इन्टरनेट चलाउने भनेको नै फेसबुक भएको छ। दैनिक रुपमा इन्टरनेट चलाउँदा अनेकन वेबसाइटहरु चलाइन्छ। जसमा कुनै मनोरञ्जन दिने हुन्छन् त कोही समाचार अनि अध्ययनका लागि उपयोगी पनि। विभिन्न वेबसाइटहरु छन् इन्टरनेटमा जसले विभिन्न सफ्टवेयर, पुस्तक अनि विचारहरु पनि निशुल्क फैल्याइ रहेका छन्। यस्ता वेबसाइटहरु मध्ये तपाइँले दैनिक हेर्ने गरेका वेबसाइट कहिले काहीँ नखुल्न पनि सक्छन्। यदी कुनै वेबसाइट पटक पटक खोल्न खोज्दा पनि ब्राउजरमा केही देखिएन वा खोल्न खोजेको वेबसाइट सँग सम्पर्क (कनेक्सन) हुन सकेन भन्ने खालको सन्देश (मेसेज) आयो भने उक्त वेबसाइटका र्सभर डाउन भएको पनि हुन सक्छ।
जान्नुस् कुन वेबसाइटको मुल्य कति
१५ चैत्र २०६९, बिहीबार ००:१८	0 321
इन्टरनेट, ज्ञान र सूचनाको खानी। त्यसो त मनोरञ्जन पनि भरपुर छ यहाँ। इन्टरनेटमा अनेकन सामग्री भएका वेबसाइट तथा वेबपेजहरु धेरै छन्। इन्टरनेटका वेबसाइटहरुको संख्याले मानिसको जनसंख्यालाई नै चुनौती दिइसकेको छ गणनामा। यस्ता धेरै वेबसाइट मध्ये कुन उत्कृष्ट छ, कुन बढि व्यवसायिक छन् भन्ने र कसले दैनिक कति कमाउँछन् भन्ने थाहा दिने वेबसाइटहरु पनि प्रसस्त पाइन्छन् इन्टनेटमा। त्यस्तै हरेक वेबसाइटको मुल्यांकन गर्ने एउटा यस्तो वेबसाइट छ जसले कुन वेबसाइटको यतिखेरको मुल्य कति हो भन्ने हिसाब गरिदिन्छ।
गुगल म्याप्समा हेर्नु सगरमाथा बेसक्याम्प
६ चैत्र २०६९, मंगलवार ११:२५	0 246
सगरमाथाको देश भनेर गर्वका साथ भने पनि अधिकांश नेपाली यसको फेदी सम्म पनि पुगेका छैनन्। आर्थिक पक्षसँगै सगरमाथा आधार शिविरमा पुग्ने नेपालीका लागि त्यहाँका व्यवसायीको सम्मानजनक व्यवहार नभएकाले पनि सगरमाथा फेदीमा पुग्ने नेपालीहरु कम भएका हुन्। सगरमाथाको आधार शिविर हेर्नका लागि त्यहीँ जान सक्नुभएको छैन भने तपाइँलाई गुगलले उपयुक्त सुविधा दिएको छ। त्यो हो गुगलम्याप्समा यसलाई हेर्ने। त्यो पनि जस्ताको तस्तै।
इन्टरनेट एक्स्प्लोररका र्सटकट की
५ चैत्र २०६९, सोमबार ०६:०९	0 251
इन्टरनेट एक्स्प्लोरर, माइक्रोसफ्ट इन्टरनेट ब्राउजर हेा यो। अधिकांश कम्प्युटरबाट इन्टरनेट चलाउनेहरु यसको प्रयोग गर्छन्। विशेष गरेर साइबर क्याफेमा कम्प्युटर चलाउनेहरुका लागि धेरै ब्राउजरको विकल्प हुँदैन। यो इन्टरनेट ब्राउजर नै एकमात्र वेबसाइटहरु हेर्ने विकल्प बनिरहेको हुन्छ। हुन त गुगल क्रोम, मोजिला जस्ता अन्य ब्राउजर पनि बजारमा स्थापित छन्। तर धेरैले कम्प्युटर सिक्दा इन्टरनेट चलाउनका लागि यसैको आइकनमा क्लिक गरेर सिक्ने भएकाले यसमा धेरैको हात र लत लागेको हुन्छ। यो इन्टरनेट एक्स्प्लोररमा माउसले क्लिक गरेर मात्र होइन कीबोर्डबाट मात्र पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि केही र्सटकट कीहरु छन् जसले तपाइँको इन्टरनेट चलाइलाई सजिलो बनाउँछन्।
सित्तैमा घुमौं विश्व
४ चैत्र २०६९, आईतवार १७:२८	0 282
घुम्न कसलाई मन लाग्दैन र? मानिसहरुको यही घुम्ने स्वभावका कारण त विश्वमा पर्यटन उद्योगको रुपमा स्थापित भएको छ। लाखौं र करोडौं मानिसहरु वार्षिक रुपमा विश्वका विभिन्न देश र स्थानमा घुम्नका लागि निस्कन्छन्। हरित उद्यमका रुपमा लिइने यो पर्यटन व्यवसायले आय आर्जनका साथै आफ्नो संस्कृतीको पनि प्रबर्द्धन गर्छ। नेपालको प्राकृतिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाका कारण नेपालका लागि यो नै सम्पन्नताको माध्यम बन्छ भनेर भनिन्छ। तर इन्टरनेटले विश्वलाई साँघुरो बनाउने क्रममा यस्तो खालको अवसरहरुको पनि सृजना गरेको छ कि अब घरको कोठाबाटै बिना खर्च नै विश्वको भ्रमण गर्न सकिन्छ।
अनलाइन डिजाइन गर्नुस् घर
३ चैत्र २०६९, शनिबार १३:५८	0 346
घर बनाउने मात्र होइन घर सजाउने चाहना पनि धेरैमा रहेको हुन्छ। घर भनेको जिवनमा एक पटक मात्र बनाइन्छ भन्ने आम धारणा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि त घर बनाउनु र सजाउनु निक्कै महत्वको कुरा हो। घर बनाउनु अगाडि खर्च जुटाउने देखी कसरी घर बनाउने काम सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्मका कुरा निक्कै गृहकार्य गर्नुपर्ने कुरा हो मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि। त्यसमा पनि इन्टेरियर र एक्सटेरियर डिजाइनका विभिन्न पक्षमा आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा सल्लाह पनि छँदैछन्। घर बनाउँदा कस्तो आकार र डिजाइनको बनाउने, बगैंचा, पार्किङ कस्तो बनाउने साथै भित्रका कोठाहरुको आकार र शैली पनि कसरी बनाउने भन्ने निक्कै महत्वका कुरा हुन्। किनभने 'घर भनेको त्यो हो जहाँ मन बस्छ'।
यूट्यूबमा हेर्नुस् लाइभ
२ चैत्र २०६९, शुक्रबार १९:०१	0 300
यूट्यूब, गुगलको भिडियो बाँढ्ने साइट। जहाँ एउटा इमेल एकाउन्टको माध्यमबाट अनगिन्ती भिडियोहरु अपलोड गरेर दुनियाँलाई देखाउन सकिन्छ। यो यस्तो वेबसाइट हो जहाँ जसले पनि भिडियो राख्न सक्छ। यसलाई वास्तवमा एउटा वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जाल भन्दा पनि टेलिभिजन प्लेटर्फमको रुपमा लिन थालिएको छ। जसले परम्परागत टेलिभिजनको भन्दा पनि धेरै खालका सुविधा दिएको छ। त्यो पनि सबै निशुल्क। तपाइँ यसमा भिडियोहरु राखेर आफन्त र साथीभाईलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पनि यसमा एउटा आफ्नो छुट्टै च्यानल खोलेर तपाइँ टेलिभिजिन प्रदर्शक पनि बन्न सक्नुहुन्छ। यो खालको सेवा दिँदै आएको यूट्यूब धेरै वेबसाइटहरुको भिडियो राख्ने माध्यम बनेको छ। यसमा समाचार देखी टेलिभिजनका सिरियल सम्म हेर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि टेलिभिजनको समय तालिका कुरिरहनु पर्दैन। वास्तवमा यूट्यूबले परम्परागत टेलिभिजिन प्रणालीलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ।
माइक्रोसफ्ट आउटलुकका र्सटकट की
१ चैत्र २०६९, बिहीबार ०६:४२	0 273
माइक्रोसफ्टको नयाँ इमेल सेवा आउटलुक यस भन्दा अगाडिका हटमेल या लाइभ भन्दा निक्कै एडभान्स रहेको छ। यसमा यो भन्दा अगाडि नभएका सुविधा तथा सेवा रहेका छन्। निशुल्क इमेल सेवाका लागि गुगलसँग प्रतिस्पर्धी रहेको माइक्रोसफ्टले आउटलुकलाई पावरफूल इमेल सेवाका रुपमा अगाडि बढाएको छ। जसमा हटमेलबाट अपग्रेड भएर पनि आउन सकिन्छ। यो इमेललाई फेसबुक, टि्वटर जस्ता सामाजिक सञ्जालसँग जोड्न समेत सकिन्छ। यदी तपाइँ आउटलुक चलाउनुहुन्छ भने यसमा विभिन्न काम गर्नका लागि माउस चलाइ रहन पर्दैन। यसका धेरैजसो कामहरु किबोर्डबाट र्सटकट की को माध्यमबाटै हुनसक्छ।
कम्प्युटरमा वीनजीप छैन यो हेर्नुस्
३० फाल्गुन २०६९, बुधबार ११:४१	0 299
तपाइँ इमेल लेख्दा वा धेरै फोटो तथा फाइलहरु पेन ड्राइभ वा कुनै ड्राइभमा राख्दा पक्कै पनि स्पेश जोगाउनका लागि जीप फाइल बनाएर अथवा फाइल कम्प्रेस गरेर राख्नुहुन्छ। जीमेल जस्ता निशुल्क इमेल सेवामा विभिन्न फरक फरक धेरै फाइल एट्याच गरेर पठाउँदा पाउनेले एकै पटक सबै फाइल डाउनलोड गर्ने हो भने पनि त्यो फाइद जीप फाइल भित्र एउटै बण्डलमा आउँछ। त्यसो त टोरेन्ट फाइलहरु डाउनलोड गर्दा ति पनि जीप फाइलकै रुपमा कम्प्युटरमा सेभ भएका हुनछन्। जसलाई खोल्नका लागि तपाइँको कम्प्युटरमा वीनजीप वा वीनआरएआर जस्ता जीप सफ्टवेयर हुनु आवश्यक हुन्छ। नत्र ती जीप फाइलका रुपमा रहेका फोल्डरहरु खुल्दैनन्।
यूट्यूबमा गरौं डिस्को
२६ फाल्गुन २०६९, शनिबार ११:२४	0 216
पार्टी गर्दै हुनुहुन्छ। वा पिकनिक। तपाइँ साथीभाई वा आफन्तसँग खुसी बाँड्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नुहुन्छ। जहाँ निकटता बढाउने मौका मिल्छ साथै रमाइलोको पनि अनुभव हुन्छ। त्यसो त यस्ता खुसी बाँड्ने समारोह गीत, संगीत र नाच बिना अपुरो नै हुन्छ। त्यसका लागि तपाइँले डिजे सहितको व्यवस्था गर्नुभएको हुन्छ। जसले तपाइँलाई अनि तपाइँको उत्सवलाई सुहाउने र तताउने खालका गीतहरु छानेर बजाइदिन्छ। यसी तपाइँका लागि डिजेकै काम गर्ने निशुल्क साइटहरु पनि छन् जसले तपाइँको रोजाइका गीतलाई डिस्को गरिदिन्छन्। त्यसमध्येको सबै भन्दा छिटो खुल्ने र धेरै गीतको संयोजन गरिदिने साइट हो यूट्यूब, सँधै हेर्ने गरेको भिडियो सेयरिङ साइट।
कम्प्युटर चलाउनलेलाई चिनौं (फोटो फिचर सहित)
२४ फाल्गुन २०६९, बिहीबार १०:२०	0 276
कार्यालय, घर वा साथीभाईको जमघट बीच चिया वा बाथरुमका लागि कम्प्युटर खुल्लै राखेर बाहिर निस्किँदा कसैले तपाइँको कम्प्युटर चलाएर स्टाटस वा केही फेरबदल गरिदिएको छ? कार्यालयका सहकर्मी साथीबीच बाथरुम वा चियाखान निस्केको समयमा खुलै रहेको सामाजिक सञ्जालका प्रोफाइलमा केही स्टाटस लेखिदिने र त्यसले गम्भिर प्रभाव समेत पर्ने गरेका कुरा सुनिन आएको छ। हुन त साथीहरु बीच फेसबुक वा टि्वटरमा हुने जिस्काइ सामान्य हो। यस्ता हल्का फुल्का जिस्काइले मित्रतालाई पनि गाढा बनाउँछ। तर कार्यालय वा कामका बारेमा साथीभाईले स्टाटसमा राखिदिने टिप्पणीले कतिलाई असजिलो पनि पारिरहेको हुन्छ। कार्यालय वा बाहिर साथीभाईका जमघटमा त्यस्ता स्टाटस कै कारण आलोचना वा व्यंग्यको शिकार पनि हुनु भएको होला। यति भएर पनि तपाइँ पत्तो पाउनुहुन्न की आखिर त्यो स्टाटस अपडेट गरिदियो कस्ले? खाली तपाइँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ बस्। मिल्न पनि सक्छ अनि नमिल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखिदिने मात्र होइन कार्यालयमा तपाइँ चिया वा बाथरुमका लागि निस्कँदा कसैले तपाइँको ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट सूचना अर्थात् डाटा पनि चोरेको हुनसक्छ। जुन तपाइँले थाहा पाउनु हुँदैन। तपाइँ हामी जस्ता सामान्य कम्प्युटर प्रयोगकर्ता इन्टरनेट वा पेन ड्राइभबाट कसैले डाटा कपी गरेको पत्तो पाउन सक्दैनौं।
वेबसाइटलाई बनाउनुस फोटो
२३ फाल्गुन २०६९, बुधबार १४:३३	0 251
तपाइँलाई कुनै वेबसाइटले आकर्षित गरयो। वा तपाइँ वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ र त्यसका लागि राम्रो डिजाइनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई सहयोग गर्ने एउटा गज्जबको टुल उपलब्ध छ इन्टरनेटमा। जसले तपाइँलाई वेबसाइटको डिजाइन खोज्न मदत मात्र गर्दैन डिजाइन गर्नका लागि सजिलो बनि बनाइदिन्छ। ब्लग लेख्ने वा ब्लगका लागि डिजाइन बनाउनेहरुका लागि पनि यो निक्कै लाभदायक हुन्छ।
रेकर्ड गर्नुस् स्क्रिन
२२ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २१:५६	0 257
तपाइँले कम्प्युटरमा गरेको कामहरु भिडियोको रुपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँका लागि इन्टरनेटमा राम्रो र उपयुक्त टुल उपलब्ध छ। जसको सहायताले तपाइँ आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा भइरहेको गतिविधिलाई भिडियोका रुपमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल वा स्टोरेज डिभाइसमा राखेर अरुलाई बाँढ्न पनि सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर प्रविधि सम्बन्धी ब्लग लेख्ने वा कम्प्युटर शिक्षा सम्बन्धी काम गर्नेहरुका लागि यो निक्कै सहयोगी हुन्छ।
मोबाइल एप र वेबसाइटमा हटाऔं विज्ञापन
२० फाल्गुन २०६९, आईतवार १५:०९	0 313
विज्ञापन, यो नै एउटा अर्थोपार्जनको माध्यम हो मिडियाका लागि। वेबसाइट हुन् या पत्रपत्रिका वा रेडियो र टेलिभिजन नै किन नहुन्। सबैको आयको स्रोत भनेको विज्ञापन नै हो। जसका कारण हामी पत्रिका पाँच १० रुपैंयामा नै अनि रेडियो, टेलिभिजन र वेबसाइट निशुल्क हेर्न पाइरहेका छौं। मोबाइल त्यसमा पनि स्मार्टफोनको जमानामा आइपुग्दा त्यो निशुल्क सेवा विभिन्न सफ्टवेयर (मोबाइलको भाषामा एप्स)मा पनि पाउन थालिएको छ। यी सबै निशुल्क पाइने सेवामा एउटा कुरा चाहिँ थोपरिएको हुन्छ प्रयोगकर्ता वा मिडियाको उपभोक्तालाई त्यो हो विज्ञापन। हुन त त्यही विज्ञापनले पनि धेरै जानकारी दिन्छ, कहिले काहिँ त समाचारले भन्दा पनि विज्ञापनले पो फाइदा पुरयाइरहेको हुन्छ। तर वेबसाइट हेर्दा त्यसमा सँधै एकोहोरो आउने विज्ञापन जो नेपाली सन्दर्भमा त तुक विनाको हुन्छ। त्यो विज्ञापनको न त हामी लक्षित वर्ग नै हुन्छौं न त्यसबाट पुगिने सेवा प्रदायकका सेवा नै हाम्रा लागि काम लाग्ने हुन्छन्। नेपाली वेबसाइटका कुरा गर्ने हो भने ठूला ठूला फाइद जीआइएफ फाइल फरम्याटमा झिपिक झिपिक मात्र भइरहेका हुन्छन्। जसले इन्टरनेटको गतिलाई मात्र सुस्त गराउँदैनन् भोलुम पनि खपत गरेर धेरै पैसा खाइ न पाइसँग काटिन्छ मात्र। त्यसखालको समस्या भोग्नुभएका एवं आफ्नो सानो प्याकेजको इन्टरनेटको स्पीडमा पनि केही छिटो वेबसाइट हेर्न चाहनुहुनेका लागि कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न विज्ञापन हटाएर हेरौं वेबसाइट लाभदायक जानकारी थियो।
यसरी गरौं अनलाइन फोटो एडिट
४ फाल्गुन २०६९, शुक्रबार ०९:३६	0 343
सामाजिक सञ्जाल तथा इमेल गर्नका लागि तपाइँले खिचेको फोटोको आकार घटाउनु परेको खण्डमा के गर्नुहुन्छ- यहाँहरुसबैले आफूले खिचेका फोटोको आकार घटाउन साथै फोटो खिच्दाका समयमा भएको असावधानिका कारण उत्पन्न परिणाम हटाउनका लागि फोटोसफ नामक सफ्टवेयर चलाउनु भएकै होला। तर यात्रामा वा घरभन्दा बाहिर साथीभाईको कम्प्युटर तथा साइबरमा बसेर कम्प्युटर चलाउनु भएको समयमा त्यहाँ तपाइँलाई फोटोसफ उपलब्ध नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाइँले खिच्नुभएको फोटो एडिट गर्नका लागि तपाइँ अनलाइन फोटो एडिटिङ टुलहरुको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशमा रहनेका लागि त फोटोसफको सफ्टवेयर प्याक किन्न महँगो पनि पर्छ।
यसरी सफा गरौं स्मार्टफोन
२३ माघ २०६९, मंगलवार १०:५९	0 286
स्मार्टफोन, आमबात बनिसकेको छ युवा पुस्ताका लागि। चाहेको सफ्टवेयर राख्न सकिने अनि त्यसमा पनि विभिन्न अनौठा सुविधा हुन थालेपछि युवा वर्गमा यसको क्रेज निक्कै बढिरहेको छ। यतिखेर सबै स्मार्ट फोन औंलाले छोएर चल्ने बनेका छन्। स्मार्ट फोन स्क्रिनटच पनि नभए त कसरी पो स्मार्ट हुने? त्यसैले सबै जसो स्मार्टफोन टचस्क्रिन नै छन्। मोबाइल फोन मात्र होइन दैनिक प्रयोगको साधन बनेको ट्याब्लेट र टीभी पनि टचस्क्रिन बन्न थालेका छन्। जसले विस्तारै किबोर्ड चलाउन पनि बिर्सने होला जस्तो हुन लागिसकेको छ। टचस्क्रिन मोबाइलका डिस्प्लेमा जति सजिलै औंला रिंगाएर अक्षर तथा अंका टाइप गर्न सकिन्छ त्यति नै यसमा दाग पनि लाग्छ। त्यसो त यो फोहोर पनि हुन्छ। त्यसैले यसको प्रयोगले बनाएको सजिलोलाई मनन गर्दै यसको सुरक्षा र सफाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। यदी काम गरिरहेको वा हात फोहर भएको समयमा मोबाइल चलाएको खण्डमा त्यसमा सामानय फोहर लाग्नु त सामान्य हो। तर यसले फोनलाई भने कुरुप नै पार्छ। स्क्रिनमा लागेको दाग सामान्य खालको भए छ पुछेर सफा गर्न सकिन्छ तर फोहर र कोरिने खालको नै अवस्था आयो भने त त्यसलाई नदेखिने बनाउन निक्कै धामा हुन्छ। स्मार्टफोन जत्ति नै स्मार्ट भएपनि यदी त्यसको स्क्रिनमा फोहर वा धब्बा लागेको छ भने त्यसले सही ढंगमा काम गर्न सक्दैन।
विज्ञापन हटाएर हेरौं वेबसाइट
२० माघ २०६९, शनिबार १८:४५	0 307
वेबसाइट, शाब्दिक अर्थका हिसाबले हेर्ने हो भने यो इन्टरनेटमा राखिएका अक्षर, तस्विर, भिडियो तथा अडियो फाइलहरु मिलाएर राखिएको पेजहरुको संग्रह मात्र हो। कुनै एक वेब र्सभरमा राखिएका त्यस्ता पेजहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वका कुनै पनि कुनाबाट आफ्नो कम्प्युटरमा रहेका वेब तथा इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट हेर्न तथा सुन्न सकिन्छ। तर यतिखेर हाम्रो जिवनमा वेबसाइटले शब्दकोषको यो अर्थ मात्र राख्दैन। जिन्दगीको अहम हिस्सा बनिसकेको छ वेबसाइट हाम्रा लागि। इन्टरनेटमा उपलब्ध यस्ता करोडौं वेबपेज इन्टरनेटको जालोमा जोडिनेहरुका लागि सूचना, मनोरञ्जन अनि शिक्षाको माध्यम बनिरहेका छन्। सस्तिँदै गएको इन्टरनेटको शुल्क अनि बढ्दै गएको पहुँचका कारण पनि आम जिन्दगीको महत्वपूर्णा हिस्सा बनिसकेका छन् वेबसाइट। त्यसैले त विश्वका विकसित मुलुकहरु फिनल्याण्ड, कोस्टारिका, इस्टोनिया, फ्रान्स, ग्रीस, स्पेन लगायतले इन्टरनेटलाई नागरिकको अधिकारको रुपमा स्थापित गरिसकेका छन्। सूचना, समाचार, शिक्षा साथै मनोरञ्जन दिने विभिन्न वेबसाइटहरु इन्टरनेटमा तयार छन्। निशुल्क रुपमा सूचना, मनोरञ्जन पाइने यस्ता वेबसाइटहरुमा विभिन्न विज्ञापनहरु राखिएका हुन्छन्।